avril 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Voalohany indrindra dia tsotra: te hampiombona antsika amin’ny Trinité Masina I Jesoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Toriteny
Nony afaka havaloana dia tonga i Jesoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Tenin’Andriamanitra
Dia mifanindry amin’io i Jesoa niakatra ho any Jerosalema satria isan’ny fety ankalazain’ny Jody ny Paka, tahak’izay koa ny Pantekôty, satria hoy ny Jody niresaka hoe: ahoana ny hevitrareo, dia tsy ho avy hamonjy ny Paka ve izy? Ary amin’io fotoana io no hisamborantsika azy. Ka tamin’ny fotoana fanakalazana ny Paka mihintsy i Jesoa no niakatra tao Jerosalema, ary tao izy no nanomboka nosamborin’ny olona fa tsy azon’ny olona, dia ny farany moa dia izy mihintsy no nitolo-batana tamin’ny nanorohan’i Jodasy azy. Ka tao anatin’ny fanakalazana ny vanim-potoanan’ny Pakan’ny Jody no nitsanganan’i Jesoa ho velona ihany koa, ka adinontsika io fa ny Paka dia efa nisy taona maro talohan’i Jesoa. Ary ankalazaina isan-taona dia nifanindry tamin’io ny Pakan’i Jesoa dia ny nitsanganany ho velona. Ho an’ny Jody ny Paka dia fialàna tamin’ny fanandevozana hidirana amin’ny fahafahana, izay ihany koa no antony hankalazana ny batemy amin’ny sasak’alin’ny Paka, izay no antony hanamasinana ny ranon’ny Paka amin’io sasak’alina io. Ny batemy dia manila antsika amin’ny fanandevozan’ny fahotana, manala antsika amin’ny toetra teo aloha hitafy fiainam-baovao; izay ilay hoa fialàna na Paka. Dia nandritra ny vanim-potoanan’ny karemy isika, efa-polo andro sy efa-polo alina niaraka tamin’i Jesoa tany an’efitra, niezaka isika niady niala tamin’ny fahotana, nanao ny sakramentan’ny fampihavanana, niala tamin’ny fahazaran-dratsy. Inoana fa samy nanao fikasana tsara isika nandritra ny vanim-potoanan’ny karemy hiomanana, ary ny vanim-potoanan’ny Paka no misy fiomanana lehibe indrindra satria ny Paka no fety voalohany sy lehibe indrindra ato amin’ny Fiangonana. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Paka – 05/04/2015 – Toriteny
Nitsangan-ko velona i Jesoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Paka – 05/04/2015 – Tenin’Andriamanitra